Taxanaha Premier League: Falanqaynta Kulmadii Todobaadka, Rikoorada Ilaa Haatan La Diiwaan Geliyey, Jadwalka Kala Sarraynta Horyalka,Halkee Lakala Marayaa Tartanka Gooldhalinta PL, 5 Qodob Oo Rooney Ka Dhigaya Halyeey Manchester Ah Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Badan. – Kooxda.com
Home 2016 December Ingiriiska, Taxanaha Bar/Ingiriiska, Wararka Maanta Taxanaha Premier League: Falanqaynta Kulmadii Todobaadka, Rikoorada Ilaa Haatan La Diiwaan Geliyey, Jadwalka Kala Sarraynta Horyalka,Halkee Lakala Marayaa Tartanka Gooldhalinta PL, 5 Qodob Oo Rooney Ka Dhigaya Halyeey Manchester Ah Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Badan.
Taxanaha Premier League: Falanqaynta Kulmadii Todobaadka, Rikoorada Ilaa Haatan La Diiwaan Geliyey, Jadwalka Kala Sarraynta Horyalka,Halkee Lakala Marayaa Tartanka Gooldhalinta PL, 5 Qodob Oo Rooney Ka Dhigaya Halyeey Manchester Ah Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Badan.
December 12, 2016 · by	Abdi Hamid Zaciimka · 2
Assalaamu calaykum akhristayaasha sharafta leh meel kasta oo aad ku sugantihiin waa isniin kale iyo barnaamijkeennii Taxanaha Premier League oo si todobaadle ah uga baxa Website-keenna wararka ciyaaraha ee kooxda.com
Barnaamijkan ayaa aanu aalaaba kusoo qaadanno, ku faaqidno, falanqayno kuna lafo gurno kulmadii ugu xiisaha badna todobaad kasta iyo warar iyo warbixinooyin xiiso leh waxaana sida caadada ahba idiin soo uririyey aniga oo ah saxiibkiin Adnan Abdirahman Mohamed .
Barnaamijkeena maanta hadii Eebbe ina haleel siiyo waxaan kusoo qadan doonnaa qodobo ay u horeeyaan :Faaqidaadda iyo falanqaynta kulmaadii todobaadka, Rikoorada ilaa haatan laga diiwaan geliyay Premeir League-ga, Jadwalka kala sarraynta horyaalka, hakee lakala marayaa tartanka gooldhalinta ilaa haatan, 5 qodob oo Weyne Rooney ka dhigaysa Halyeey-ga Manchester United,6-da kooxood ee ugu waaweyn horyaalka midkee celcelis ahan haysata bedelka ugu qiimaha sarreeya Premeir League.
*Fallanqaynta Kulamadii Todobaadka
Dhamaan kulamadii la ciyaaray Premeir League-ga
Leicester City 4-2 Manchester City
Vardy (3′, 20′, 78′) King (5′) . Kolarov (82′), Nolito (90′)
Xiddiga kooxda Dacawooyinka ee Jamie Vardy ayaa saddexleey dhaliyey si uu kooxdiisa ugu hubiyo inay hantiday saddexdii dhibcood ee kulankaan.
Kooxda Leicester City ayaa daqiiqdii 5-aadba hogaanka ku haysay 2:0 taas oo noqotay mid taariikh ku samaysay kooxda Macallin Peo Guardiola , sidoo kale ciyaarta ayaa 3:0 maraysan 20-kii daqiiqo ee ugu horreeyay iyadoo wiilasha carbeed oo Slimani iyo Mahrez oo kaashanaya weraryahankooda mgajaysan ee Vardy ay cawsak garoonka jiidjiidayeen gaal haye Bravo iyo daafacyada kooxda Muwaadiniinta.
Vardy ayaa kadib 10 kulan oo uu ka qataanaa dhadhanka goolasha markaan saddexleey ku hafto baxay iyadoo xiddiga lambarka tobnaad ee dacawooyinku uu goolka afraad dhashaday.
Kooxda Manchester City ayaa keliya shabaqeed ilaashatay 2 kulan oo keli taas oo dilaysa hamiga taagerayaasha kooxda muwaadiniintu ay ka qabaan hanashada horyaalka iyadoo ay middas kulankaan u dheerayd weerarka madhalayska ah iyadoo lixdankii daqiiqo ee ugu horraysay dhamaan ciyaartoyda weerarka ee kooxda City ay ku guul darraysteen inay wax fursad ah abuuraan.
Keliya laba gool ayay lasoo noqotay iyadoo xiddigaheeda Kolarov iyo Nolito ay kooxdaan ka badbaadiyeen eeb saaid ah oo ay la kulmi kari lahyd kulankaan , guul darradaan ayaana ka dhigan in kooxda City aysan dheegna uga dhaqaaqin booskii ay ku sugnayd laba kulan ka hor.
Xiddigii garoonka: Jamie Vardy
Walcott (42′) Ozil(49′) Iwobi(75′) . Adam (29′ Rik)
Galabnimadii Sabtida Kooxda Arsenal ayaa naadiga Stoke City kusoo dhaweysay gegada Emirates Stadium xilli kooxda Arsenal ay u cadeyd inay hogaanka horyaalka Tiigsadaan
Kooxda Arsenal ayaa Guul xalaal ah ka gaartay dhigooda Stoke City iyada oo kooxda Gunners gool looga hormaray ay ku bedeleen sadex gool oo darandoori ah.
Charles Adam ayaa goolhaye Petr Cech kala dhantaalay kadib markii gool ku laad loo dhigay kooxdiisa Stoke wuxuuna xidigani isaga oo u aabe yeelay kubada ku hubsaday shabaqa xaaris Cech ilaalinayay. Ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1:0 Arsenal hogaanka looga hayo.
Intaasi kadib Kooxda Arsenal ayaa kubada sida ay doonaan ka yeelay iyaga oo garoonka hadba dhinac u giraaminaysay waxayna isku dayayeen inay halis ku abuuraan daafaca Stoke City. Ugu danbeyn dadaalka wiilasha Arsene Wenger ayaa miro dhalay kadib markii uu Theo Walcott shabaqa soo taabatay sidaasina ciyaarta uga dhigay 1:1 ay kooxda Gunners ciyaarta kusoo laabato.
Waxaa qehbtii hore ee ciyaarta lagu kala baxay barbaro min 1 gool ah.
la iskusoo laabay waxaana qeybtii labaad dardar xoog leh kusoo gashay kooxda Arsenal isla bilowgii qeybta labaadna gool qurux badan ku dharbaaxday Stoke. Goolkan oo ahaa mid aad u qurxoon oo uu kasoo shaqeeyay Oxlade-Chamberlain waxaana goolkan shabaqa dhex shigay Mesut Ozil.
ugu danbeyn kooxda Gunners ayaa neefta ku celisay Stoke City kadib markii uu Alex Iwobi oo bedel kusoo galay saxiixay goolkii sadexaad ee Arsenal ku khaarajisay dhigooda Stoke. Waxaana goolkan kasoo shaqeeyay Alex Sanchez.
Ugu danbeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 3:1 ay kooxda Arsenal laba cad u kala dhigtay Stoke City xilli ay hogaanka si kumeel gaar ah u qabteen balse shalay axadii ayaa xilka laga tirsaday kadib markii Chelsea gool lagu rafaaday ku garaaceen West Brom.
Xiddigii Garoonka: Hector Bellerin
Kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge kusoo dhawaysay kooxda West Brom iyadoo maanka ku haysay in kooxda Arsenal ay la wareegtay hogaanka.
Kooxdaan ayaa 100% loo saadaalinayey inay badin doonto maadaama ay kooxdaan cashar u soo dhigtay kooxaha waaweyn isla markaana ay guulaysaty 8 kulan oo isku xigta .
Sidii la filayey ayaa dhacday kooxda Chelsea-na waa ay guulaysatay balse guushaasi si dhib yar kuma aysan imanin oo waxa iska caabin weyn muujiyay daafacyada iyo dhamaan ciyaartoyda kooxda West Brom iyagoona dhib caha si fara maroojis ah looga qaaday kaddib markii weeraryahanka reer Spain Diego Costa uu kubbad ka boobay McAULEY.
Kooxda West Brom ayaa ku tiirsaayd kubadaha rogaal celiska ah iyagoo ilaa qaybtii hore iyagu ahaa kuwa helayey fursadaha ugu khatarsan iyadoo kooxdanina ay kalsooni ku qabtay inan laga so badin afartii kulan ee ugu dambeeyay iyadoo badisay 3 halka midka kalena ay barbaro gashay.
Dhanka kale weeraryahan Diegol Costa ayaa wax qabadkiisii gabi ahaanba sannadkii hore ku batreejeeyey keliya 15 kulan oo ilaa hatan la ciyaaray waana isaga ninka imika hogaanka u haya goolahsa Premier League .
Chelsea ayaa hadda 3 dhibcood ka sarraysa kooxda Arsenal oo kaalinta labaad kusoo jirta halka ay 6 dhibcood hoos u eegayso kooxda Liverpool oo keliaya la ogaaday inay ahayd Philippe Coutinho .
Xiddigii garoonka: Diego Costa
Dhanka kale kooxda Liverpool kulankii labaad oo isku xigta dhibco iska khasaarisay kaddib markii ay barbar dhac 2-2 ah la gashay kooxda West Ham.
Kulankaan ayaay kooxda Liverpool maanka ku haysay ina ay soo yarayso farqiga dhibcaha ee kooxda Chelsea taas iyana sidaan hore usoo sheegnay faro ciddididood kaga baxsatay kooxda West Brom.
Adam Lallana ayaa daqiiqadihi horeba hogaanka u dhiibaya kooxda Liverpool balse hogaankaas ma noqon mid sii waara waxaana goolka bareejada laad xor ah oo aad qurux badan ku dhaliyey Payet kaddib markii dabacsanan muujiyay goolhaye Karius, waxaana goolka labaad raacsaday xiddiga dhawaantan kacsan ee Antonio kaas oo ka faa’idaystay khakad ay sameeyeen daafacyada Liverpool waxaaab uu si cajiib ah u daba mariyey gool haye Karius iyada oo uu wax ficil ah awoodi waayay Clyne oo kubafaas ka daba tegey sidaas ayaana nasashada lagu aaday.
Markii la isu soo sharaabay kooxda Liverpool ayaa mar walba isku dayaysay inay ciyaarta iyo barbarahaba kusoo laabato iyada oo ay si wayn u muuqanayeen isla markaana fursadaha goolasha loo filan karayey ay abuurayeen Jordan Henderson iyo Sadio Mane ilaa ugu danbayn ay goolka bareejada la yimaadeen.
Sadio Mane ayaa dhanka bidix ee xerada ganaaxa kubbad kasoo karoosay taas oo u tagtay goolhayaha West Ham balse waxa uu awoodi waayay inuu kubada sii haysto isagoona keliya kubada u sallaxay Origi oo shabaqa ku hubsaday kubadaas ciyaarta ayaana noqotay 2-2.
Wixi intaas ka dambeyay ciyaartu waxay ahayd Liverpool oo goolka bartilmaameedsanayss iyo West Ham oo difaaca ku jirta waxabana iskama aysan bedelin goolasha ugu danbaynna garsooraha ayaa ku dhawaaqay in ciyaartu barbaro 2-2 ah kudhamaatay.
Xiddigii garoonka: Sadio Mane.
Hadii aan markaan diirada ku weecinno kulankii todobaadkan ugu weynaa Premeir League kas oo garoonka old Trafford ku dhex maray Kooxda Manchester United iyo dhigeeda Tottenham kulankaas oo ku dhamaaday gool nadiif ah oo ay saddexda dhibcood ku qaadatay kooxda macallin Mourinho.
Tottenham aya kulmadii u danbeeyay dhibtoonaysay iyado laad lagaga soo saaray tartanka Champions League kooxdanina ma aysan ahayn kooxdii aad ku taqaannay kartida sidoo kalena macallin Mourinho ma uusan ahayn tababarihi ku dhegenaa habaar qabe Fellaini isagoo kulankaan shaxdii loo bahmaa kusoo galay.
Carrick ayuu dhexda ku aaminay isagona ka horraysiiyay Harrera iyo Pogba isagoo ka farxiyay taageerayaasja ka dib markii uu soo safay Mkhitaryan kaas oo ay weheliyaan Ibrahimovi iyo Anthony Martial.
Kulankan ayaa ahaa kulan furnaa oo aysanna koox difaaca ku jirin iyada oo weerarada labada kooxoodba aanay kala go’anyn marka laga reebo kooxda tottenham oo kubadda aad u raacanaysay.
Wax kulanku ahado weerar iyo weerar celisba daqiiqaddi kulankaan.ayaa la gaadhay waxaana shabaqa ruxay Mkhitaryan kaas oo kubad ka dhex bixis ah ka helay Andre Harrera isagoon laba labayna waxa uu meel sare kubad ka sudhay shabaqa goolhaye Lloris.
Mar kale Zlatan ayaa kubad khasaariyey waxaana khasaaraha sii badiyey pogba oo bulusoon aad u qurux badan birta kaga gariiriyay fursadahaasna ma aysan noqon kuwa hogaanka bedela, Kulanka ayaana sidaas kusoo gabagaboobay iyadoo Kooxda Tottenham hada ku jirto kaalinta 5aad halka Manchester Unitedna ay ku jirto kaalinta 6aad.
Xiddigii garoonka: Andre Herrera
Rikoorada Ilaa Hatan Laga Diiwaan Geliyey Horyaalka.
-Dimitr Payet ayaa ilaa haatan dhaliyey 3 laad xor ah oo horyalka ah waana ninka ugu sareya ee xilliciyaareedkan intaas dhaliyey.
-Manchester United ayaa ugu danabyn heshay guusheedii ugu horraysay ilaa September, waxay barbaro gashay afartii kulan ee ugu danbeeyay ee ay gurigeeda ku ciyaartay.
-Kooxda Liverpool aya dhalisay 37 gool waana in kabadan koox kasta oo horyaalka ka ciyaarta .
-goolkii uu Antonio ka dhaliyey Liverpool ayaa noqday goolkii u horreeyay e uu xiddiganu dhaliyo isaga oon madaxiisa isticmaalin
*Jadwalka Kala Sarraynta Horyaalka Premeir League
Yaa Hogaaminaya Gooldhalinta Horyaalka?
*5 Qodob Oo Weyne Rooney Ka Dhigaysa Halyeeyga Kooxda Manchester United.
1-Wuxuu Ku Guulaystay Koob Kasta Oo Uu La Saftay Shayaadinta CasCas.
Weyne Rooney waxa uu kooxdaa Manhester united kula guulaystay koob kasta oo uu la saftay kooxdaan marka laga reebo Europe League oo uu sannadkaan u tartamayo.
5 Premier League ayuu Sir Alex kula guulaystay isagoo 2008-dii ku guulaysaty koobka dhegaha weyn leh ee Champions league iyo sidoo kale 2 League Cup isagoo ugu danbaynna Luis van Gaal kula guulaystay FA-Cup , 4 Community Shield iyo 1 Clup World Cup ayaa qasanaddisa ku jira.
2-Waa Gooldhaliyaha Ugu Sarreeya Kooxda Manchester United.
Wayne Rooney waxa uu hal gool u jira rikoorka gool dhaliyaha ugu sarreeya kooxda Manchester United kaas oo uu Sir Bobby Charlton ku hayo 249 gool.
Miyaanu ahayn rikoorka ugu qalisan ee kooxdaan hadii xiddigaan heerka caalami ee qaranka England uu 536 kulan oo uu saftay ku dhaliyey 248 gool isla markaasna uu weli goolal dhalinaayo?
3-Mar Kasta Waa Ciyartoy Kooxda Ah.
Kabtanka haatan ee kooxda Manchester United mar waxa uu ahaa bedelka Vanistelrooy hadana sannadihiisi ugu wanaagsanaa ayuu ku hoos jiray hooska Cristiano Ronaldo, balse mar kasta waa Weyne Rooney kooxda u dagaalama u sameeyana wax kasta oo laga dalbado waxa uuna sannad kasta u dagaalamaa calaamadda Manchester United.
4-Weligii Kama Dhiman Ruuxiyadda Ciyaartoynimo Ee Manchester United.
Intii uu Weyne Rooney u ciyaarayey kooxda Manchester United mar walba waxa saarnayd Culayska inuu yahay calaamadda kooxda , Xilli hore waxa uu ahaa da’yar laga filaayey mustaqbal weyn , mar kale waxa uu ahaa ciyaartoy booska ka cidhiidhsanaayaa ciyaartoydii dunida ugu waaweynayd , markan waa hogaamiyaha kooxda ,markastana waxa saaran diiradda mar kasta la tacaalayey canaan iyo cadho kala kulmayey taageerayaasha kooxda balse weligiis ma uusan liicin weligiisna wuxuu ahaa nin uu ku jiidho dhiiga shayaadiinta cascas.
5-Adeegiisa Wakhtiga Dheer.
Waad ilaawi kartaa wakhtigii uu Weyne Rooney isagoo 18 jir ah 2004-tii u saxiixay kooxda Manchester United isla markaana noqday da’yarkii ugu qiimaha sarreeyay waqtigaas [ waa run waad illaawi kartaa] balse ma ilaawi kartid in lambarkan 10-aad uu qalcadda Old Trafford soo galayey laga soo bilaabo Roy Keane, Edwin van der Sar iyo Paul Scholes ilaa Anthony Martial, Jesse Lingard iyo Marcus Rashford.
Sidoo kale ma illaawi kartid inuu ka garab ciyaaray halyeeyadii kooxdan sida Ole Gunnar Solksjaer, Ryan Giggs, Gary Neville, Roy Keane iyo qaar ka midah xidiigihii ugu fiicnaa wakhtigaas sida Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Radamel Falcao iyo sidoo kale Zlatan Ibrahimic, ku darso maynaan sheegin marka uu qaranka ka dheelayo.
Ugu dambayn hadii Rooney 5-taa qodob buuxiyay moyaanu ahayn halyeyga kooxda Manchester United markaad meel iska dhigto taagerada kooxaha kale ee horyaalka .
6-da Sare kooxdee haysata haysata Bedelka Ugu Qaalisan.
Waxaynu kaloo ku micnayn karnaa kooxdee lacagta ugu badni ka khasaartay? Miyaanay ahayn ? hadii aad xiddig lasoo wareegto isla markaana aanu waxba kuu tarin marka laga reebo inuu kursiga kaydka kuu qurxiyo amba se uu kuu nasiyo ciyaartoydaada koowaad , dabcan lacagtaasi wa mid khasaartay.
Hadaba waxaan dib u tirin doonaan 6 kooxood ee sare midka haysata bedelka ugu qaalisan. aan isla egno.[lacagtu waa
6-Arsenal 4.4m gini
5-Tottenham 5.4m Gini
4-Liverpool 6.2 Million gini
3-Manchester City 7.9 Million gini
2-Manchester United 10.8 Million gini
Waa Billaahi Tawfiiq.
Filed in: Ingiriiska, Taxanaha Bar/Ingiriiska, Wararka Maanta
2 Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “Taxanaha Premier League: Falanqaynta Kulmadii Todobaadka, Rikoorada Ilaa Haatan La Diiwaan Geliyey, Jadwalka Kala Sarraynta Horyalka,Halkee Lakala Marayaa Tartanka Gooldhalinta PL, 5 Qodob Oo Rooney Ka Dhigaya Halyeey Manchester Ah Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Badan.”
Abdiqani January 14, 2017 at 11:52 am · Edit
Kooxda.com barnaamikan maad iska deyseen week kasta waad soo galin jirteen Marka PL la ciyaaro .waan la socon jiray barnaamijkan ee week gan 21aad marka la ciyaaro PL soo diyaariya pls ?
abdi December 28, 2016 at 9:05 am · Edit
Eden Hazard Oo Si Daacad Ah Uga Hadlay Xilli Ciyaareedka Kooxdiisa Fartana Ku Fiiqay Qofka Sababta U Ah
Barcelona Oo Xasuuq Aan Loo Kala Hari Kula Kacday Sevilla & Blugrana Oo Markii 4-aad Oo Xiriir Ah Kor U Qaaday Koobka Copa Del Rey-ga
Halyeeyga Kooxda Liverpool Ee Luis Garcia Oo Mohamed Salah U Sheegay Qaabka Uu Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi Ugu Garaaci Karo Abaalmarinta Ballon d’Or-ka